Vahaolana tena izy hanatsarana ny fifandraisan'ny mailaka | Martech Zone
Zoma, Martsa 6, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mahazo izay tadiaviny amin'ny fifandraisana mailaka ve ny mpanjifa? Misy ve ny tsy fahombiazan'ny mpivarotra hanaovana fampielezan-kevitra amin'ny mailaka misy dikany, misy dikany ary mahasarika? Ny orinasan-telefaona ve no fanorohana ny fahafatesan'ny mpivarotra mailaka?
Araka ny vaovao farany fikarohana notohanan'ny Liveclicker ary notarihin'ny The Relevancy Group, ny mpanjifa dia maneho ny tsy fahafaham-pony amin'ny mailaka mifandraika amin'ny marketing aseho amin'ny finday. Ny fanadihadiana natao tamin'ny mihoatra ny 1,000 dia nanambara fa mety tsy hahatratra ireo mpanjifa mandray anjara feno amin'ny fampiasana mailaka finday ireo mpivarotra.
Efatra amby efapolo isan-jaton'ny mpanjifa nohadihadiana no nilaza fa tsy tian'izy ireo ny mandray mailaka amin'ny mailaka amin'ny telefaonin'izy ireo satria matetika dia betsaka ny mailaka azony. Fito amby telopolo isan-jato no nilaza fa tsy misy ifandraisany ireo hafatra ireo, ary 32 isan-jato no nilaza fa kely loatra ireo hafatra ireo ka tsy afaka ifandraisana amin'ny finday.
Miaraka amin'ny antsasaky ny (42 isan-jato) ny mpanjifa mampiasa ny findainy hizahana ny boaty ao anaty boaty hanapahany hevitra izay hovakiany na tsy hovakiany any aoriana ary efa ho ny ampahatelony mampiasa azy ireo ho toy ny fitaovana ampiasain'izy ireo voalohany, dia toa misy olana lehibe eo amin'ny mpivarotra.
Mazava amin'ny fikarohana nataontsika fa manantena zavatra bebe kokoa avy amin'ny mpivarotra ny mpanjifa ary ny famahana ny olan'ny mailaka amin'ny finday fotsiny dia tsy ampy hahazoana tombony amin'ny fifaninanana. Ny fananganana paikady izay misy paikady kendrena amin'ny fotoana tena izy toa ny timer fanisana na ny fahana ara-tsosialy mivantana, amin'ny teknika mandroso kokoa, toy ny fanovana manokana ny atiny sy ny atiny web mivantana, dia afaka mamorona traikefa mahery vaika ary mitondra fifamatorana na inona na inona fitaovana ampiasain'ny mpanjifa mailaka, fa indrindra ho an'ireo mpanjifa misy lahasa maro eny an-dalana. David Daniels, The Relevancy Group
Saingy toa tsy mitsambikina amin'ny lalana ny mpivarotra mba hampiharana ireo karazana fitaovana ireo. Ao amin'ny tapany faharoa amin'ny fanadihadiana, izay nanontany momba ny orinasa 250 sy ny mpivarotra afovoany, ny The Relevancy Group dia nahita fa ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tsy nampiasa tetika fikendrena hametraka ny hafatra mailaka mifandraika amin'ny sahan'ny mpandray - na inona na inona fitaovana ampiasain'izy ireo amin'ny mailaka, fa laharam-pahamehan'ny mpanjifa misy lahasa maro eny an-dalana.
16-37 isan-jaton'ny mpivarotra ihany no nitatitra fa mampifantoka ny atiny mifototra amin'ny toerana, potoana, Weather, karazana fitaovana, ambaratonga fitehirizana or fifandanjana valisoa tsy fivadihana. Ny anton'izany dia toa tratry ny tsy fahampian'ny data sy ny fanamby amin'ny fandrindrana ny programa izy ireo.
Raha jerena ny habetsaky ny marketing amin'ny mailaka sy ny habetsaky ny hafatra apetraky ny mpanjifa, ny mpivarotra dia mila miady amin'ny fahazoana miditra data izay azo ampiarahina amin'ny toe-javatra amin'ny fotoana tena izy mba hahatsapana ny fitomboan'ny vola miditra sy ny tombony azo. Ireo mpampiasa finday dia mahatsapa ny hafatry ny hafatra, noho izany ny fampiasana teknika ahafahan'ny mpivarotra mijanona amin'izao fotoana izao nefa tsy mitombo ny fahita matetika dia zava-dehibe.
Saingy tsy tokony hatahotra ireo mpivarotra, satria misy fomba mora hanombohana fampiharana paikady kendrena amin'ny fotoana tena izy mba hanaovana fampielezan-kevitra amin'ny mailaka ary handroso hatrany amin'ny fampiharana sarotra kokoa avy eo.
Ohatra, amin'ny fampiasana teknolojia tena izy, ny mpivarotra dia afaka mamadika bokotra fampidinana rindrambaiko manokana amin'ny alàlan'ny fitaovana ampiasaina mandritra ny famakiana ny hafatra. Toy izany koa, ny mpivarotra dia afaka manamboatra ny famoronana mba hampisehoana na tsy hanehoana atiny miorina amin'ny fitaovana finday ampiasaina.
Ireto ambany ireto ny ambaratongam-pitsikilovana sy ohatra amin'ny tetika tena izy azo raisina:
fahaizana - Timer Countdown, feed ara-tsosialy mivantana
kafa - Fanokana-toerana manokana, fanandramana A / B tena izy ary horonan-tsary tafiditra
Advanced - Votoatin'ny tranonkala mivantana, fe-potoana voafaritra manokana
Manam-pahaizana: Fomba manokana amin'ny fotoana tena izy amin'ny fampiasana loharanom-pahalalana tsy mitovy
Amin'ny dingana ambany indrindra amin'ny tohatra, ny tetika toy ny fahana ara-tsosialy ary mpanisa isa mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny sehatra marina, mampiseho fiakaram-bidin'ny 15 ka hatramin'ny 70 isan-jato raha oharina amin'ireo mailaka izay tsy ahitana singa toy izany.
Ity tatitra ity dia antso ho an'ny mpivarotra hamaly amin'ny fomba mahomby ny fitakian'ny mpanjifa na mety ho lany andro. Ny fametrahana vahaolana amin'ny fotoana tena izy mifototra amin'ny toe-javatra misy anao sy ny enti-manana tsy manam-paharoa dia afaka manova ny doka am-barotra amin'ny mailaka ary misy akony haingana amin'ny faran'ny farany. Raha te hahalala bebe kokoa dia vakio ny White Paper: Fikarohana ireo tombontsoa azo avy amin'ny mailaka amin'ny fotoana tena izy - Fahombiazana amin'ny familiana amin'ny marketing.
Momba ny RealTime Email avy amin'ny LiveClicker
Ity lahatsoratra ity dia nosoratana niaraka tamin'ny fanampian'ny RealTime Email avy amin'ny Liveclicker, sehatra hametrahana vahaolana atiny tena izy, fitsapana amin'ny fotoana tena, fikendrena ary analytics.
Tags: Fanamafisana ny toetoetraTimer Countdownmailakamisokatra ny mailakahoronan-tsary tafiditrafeed ara-tsosialy mivantanaVotoatin'ny tranonkala mivantanaliveclickerfe-potoana voafaritra manokanaamin'ny fotoana katrokaFitsapana A / B amin'ny fotoana tena izymailaka tena izyPersonalization amin'ny fotoana tena izyamin'ny fotoana katrokamailaka realtime